ဖော ငျး ထ နေ တဲ့ ပပ စော ကျ ဖု တျ ကွီး - Owl Myanmar News
ဖော ငျး ထ နေ တဲ့ ပပ စော ကျ ဖု တျ ကွီး
အံသွစရာမွငျကှငျးကွောငျ့မကျြလုံးပွူးမိသညျ။ အတှငျးမှာ ကိုအောငျကြျောနှငျ့အတူ မြိုးပပ ရှိနပွေီး မြိုးပပရဲ့ လကျကောကျဝတျတှကေို ပူးကာ အောငျကြျောက ကွိုးနဲ့ စိမျပွနေပွေ ခညျြနခွေငျးကွောငျ့ပငျ။ ကြှနျအျောဟဈဖို့ ကွံလိုကျပမေဲ့ ထူးဆနျးနသေော မြိုးပပကွောငျ့မအျောဖွဈ။ လကျနှဈကို သူတပါးက ကွိုးတုပျနတောတောငျ ပါးစပျကအားနပေမေဲ့ မြိုးပပအျောဟဈခွငျးမရှိ။ ရုနျးကနျခွငျးမရှိ။ ရဲစခနျးမှာ သှားရောကျ အဖမျးခံသော အပဈသားလို လိုကျလိုကျလြောလြောရှိနခွေငျးပငျ။ ကွိုးခညျြကွီးတော့ ပိုနသေော ကွိုးစအရှညျကို ထုတျတနျးပျေါပဈလြိုပွီး တဈဖကျက ပွနျကလြာသောကွိုးစကေစောငျ့ဆှဲလရာ ပပတဈယောကျ လကျမွှောကျလကျြသားဖွဈသှားသညျ။ အောငျကြျောက မကနြေပျသေး ထပျပွီး ဆှဲလိုကျရာ ခွဖြေားထောကျအနအေထားဖွဈသှားတော့မှ ကွိုးစကို အနီးက ခုတငျတိုငျမှာ ခညျြလိုကျသညျ။ ပပနှုတျမှာ ကွိုးကို ဆှဲလိုကျခြိနျလကျတှနောသှားသဖွငျ့ အ ဟုအျောဟဈရုံမှအပ တခွားတုံ့ပွနျမှုမရှိ ။
မြိုးပပတဈယောကျလကျတှမွှေောကျထားရတော့ ကဈြလဈသှယျလသြောကိုယျနဟေနျထားက ပျေါလှငျနသေညျ။ အပျေါဝတျရငျဖုံးလကျရှညျလေးက အနညျးငယျပါးသဖွငျ့ အောကျခံဘျာလီကိုပငျမွငျနရေသညျ။ ခါးကို ကဈြလဈစှာစညျးနှောငျထားသော အထကျဆငျစကို အောငျကြျောက ဖွုတျခလြိုကျသဖွငျ့ လုံခညျြလေး ပနျးနုခွရေငျးမှာပုံကသြှားသညျ။ အောငျကြျောက ပပရဲ့ ပငျတီကို ဆှဲခြှတျလိုကျသညျ။ ကြောငျးမှာ အိနွေ်ဒရှိလှပါသညျဆိုသော ပပ အောကျပိုငျး အဝတျဗလာနှငျ့ဖွဈသှားသညျ။ ကို အောငျကြျောရဲ့လကျတှကေ အငွိမျမနေ အဖုတျလေးကို ပှတျသပျနှိုကျစှနသေညျ။ ပပကတော့ခေါငျးလေးမော့ အံကို ကြိတျကာ ခံစားနသေညျ။ ကွညျ့နရေငျးပငျ အောငျကြျောက ပပရဲ့ အဲ့နရောကို လကျဖဝါးနဲ့ နှဈခကျြလောကျ ရိုကျလိုကျသညျ။ ပပတော့ ဘယျလိုမသေညျမသိ။ ဖောငျးကနဲအသံကွောငျ့ ကြှနျမပငျရငျတှတေုနျမိသညျ။ ခန်ဓာကိုယျကို တှနျ့လိမျနသေော ပပကို မွငျနရေသညျ။ ကိုအောငျကြျောက ပပကို ကြောပေးလိုကျပွီး သူ့ရဲ့သံသတ်ေတာလေးထဲက တဈစုံတဈရာကို ထုတျယူလိုကျသညျ။ ထောငျမှနျစတုဂံပုံ လေးထောငျ့တုံးလေးတဈခု။ အဲ့အတုံးလေးမှာ ဝိုငျယာနဲ့ ဆကျထားတဲ့ ဘဲဥပုံစကျကလေးတဈခုလဲပါသညျ။ကိုအောငျကြောက လေးထောငျးတုံးလေးက တဈစုံတဈရာကို နှိပျလိုကျရာ ဘဲဥပုံ စကျကလေးက တှီကနဲ အသံခပျပါးပါးနဲ့တုနျခါနသေညျ။ ထိုတုနျခါနသေောစကျကလေးကို ပပရဲ့ ရငျသားပျေါတို့ထိကစားနသေညျ။
ပပခမြာ မကျြနှာလေးရှုံမဲ့ရငျး တအအနဲ့ ညညျးညူရငျးခံစားနရေရှာသညျ။ ထို့နောကျကိုအောငျကြျောက ထိုဘဲဥပုံစကျလေးကို ပပရဲ့အဖုတျထဲထိုးထညျ့လိုကျသညျ။ အားအအ ဒီတဈခေါကျတော့ ပပဆီက ညညျးသံအကယျြကွီးထှကျလာသညျ။ အောငျကြျောက ခကျြခွငျးမတျတပျထကာ ပပရဲ့ ပါးနုနုလေးကို ဖွောငျးကနဲ ရိုကျခလြိုကျသညျ။ နငျအဲ့လောကျအသံကယျြနရေငျ ဟိုဘကျက ဟာမကွားသှားဦးမယျ နငျ့ပါးစပျကို ပိတျထားရမယျ။ ကိုအောငျကြျောက ပွောပွောဆိုဆို ကွမျးပွငျပျေါက ပငျတီလေးကိုယူကာ ပပပါးစပျထဲထိုးထညျ့သညျ။ ကွညျ့နတေဲ့ ကြှနျမဝေါ့ကနဲပငျ ပြို့တတျမိသညျ။ သို့သျောမကျြနှာမလှဲမိ။ အောငျကြျောက တှဲလောငျးကနြတေဲ့ လေးထောငျ့တုံးလေးကို ပပရဲ့ ဘယျဘကျပေါငျမှာကပျကာ တိပျနဲ့ ပါတျခညျြထားလိုကျတယျ ပွီးတော့ တုနျခါမှုကို အမွငျ့ဆုံးပွောငျးလိုကျပုံရသညျ။ စကျအသံကို အနညျးငယျကြှနျမကွားနရေသညျ။ ပွီးတော့ ခွရေငျးက ပပရဲ့ထဘီကို ပွနျဝတျပေးသညျ။ ခွကေငျြးဝတျတှကေိုလညျးပူးကာ ကွိုးခညျြလိုကျသညျ။
ပပကတော့တှဲလောငျးလေးနဲ့ တှနျ့လိမျနသေညျ ကိုအောငျကြျောကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပငျ အရကျကလေးသောကျရငျး အရသာခံကာ တစိမျ့စိမျ့ထိုငျကွညျ့နသေညျ။ ပပတှနျ့လိမျနရေမှ ဝဒေနာကို မခံစားနိုငျလို့ထငျသညျ။ လကျတှကေို ရုနျးကနျနသေညျကို မွငျရသညျ။ ခွဖြေားထောကျအနအေထားဆိုတော့ ခြိနျသီးလေးလို လှုပျရမျးနသေညျ။ သုမကိုကွညျ့ရငျး ကြှနျမ အာခေါငျထဲခွောကျငပျလာသလိုခံစားရသညျ။ဝူးဝူးဝါးဝါး ညညျးသံတှလေညျးကွားနရေသညျ။
ကြှနျမဒီနရောကနေ ထှကျသှားသငျ့ပွီးလို့ တှေးမိပမေဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို မလှုပျရှားမိ။ တှနျ့လိမျရုနျးကနျနသေော ပပဆီကနေ မကျြလုံးအစုံကို မခှာနိုငျ။ အနညျးငယျအကွာမှာ ပပ ငွိမျသကျသှားသညျ။ ခံစားမှု အဆုံးအစှနျကို ရောကျကာ ခွကေုနျလကျပနျးကသြှားပုံရသညျ။ ကိုအောငျကြျောထိုငျနရောမှထကာ ပပကို ကွိုးဖွညျပေးဖို့ပွငျသညျ။ ကြှနျမလညျးတျောသငျ့ပွီဟုတှေးကာ စိတျလှုပျရှားစှာ ပွနျခဲ့တော့သညျ။
မနကျခငျးဟာ ပုံမှနျအတိုငျး လညျပတျနသေညျ။ ခု ကြှနျမရှကေ့ ပပဟာ ညက မြိုးပပမဟုတျတော့သလို တညျငွိမျနသေညျ။ ယူနီဖောငျး အဖွူ အစိမျးနဲ့ ခပျြခပျြရပျရပျ လှလှပပ အိနွေ်ဒရှငျမလေးပွနျဖွဈနသေညျ။ ပုံမှနျအတိုငျး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မနကျစာကို စားသောကျလြှကျရှိသညျ။ ကြှနျမမှာသာ ညကပုံရိပျတှေ မွငျယောငျရငျး ငိုငျနမေိသညျ။ နှငျးဝေ ဘာတှဖွေဈနတောလဲ နမေကောငျးဘူးလား…….။ ပပရဲ့မေးခှနျးကွောငျ့ ကြှနျမ ငိုငျနမေိရာ က အသကျပွနျဝငျလာတယျ။ ဟို….. ဘာမှမဖွဈပါဘူး အဲ့တာဆိုလညျးစားလေ တျောကွာကြောငျးနောကျကနြဦေးမယျ။ ကြှနျမလဲ စားစရာရှိတာဆှဲပီး ဆှဲခငျစလေးဆှဲကာ ကြောငျးရှိရာသှားဖို့ပွငျဆငျရပါသညျ။ ကြှနျမတို့နှဈယောကျက ဒီရှာလေးမှတာဝနျကတြဲ့ကြောငျးဆရာမတှပေါ။ ကြှနျမထကျစာရငျ မြိုးပပက စီနရောကပြါတယျ။ ကြှနျမက ဒီရှာရောကျတာ စာသငျနှဈ တဈနှဈစာသာရှိသေးသညျ။ ကိုအောငျကြျော က ဒီခွံထဲမှာ အိမျစောငျ့သဘောမြိုးနတေဲ့သူ။ အိမျက သူတို့မိသားစုပိုငျအိမျပါပဲ။ ကနျြမိသားစုတှကေ မွို့တတျနထေိုငျကွပမေဲ့ သူကတော့ သူ့အိမျလေးထဲမှာ နကေနျြခဲ့သညျ။ ဘှဲ့ရ ပညာတတျ နိုငျငံခွားသှားပွီး ပညာသငျဖူးသညျဟုသိရသညျ။
ခွံထဲမှာ တံမွကျစဉျးလှဲနတေဲ့ ကိုအောငျကြျောကိုတှရေ့သညျ။ သူကတော့ ထုံးစံအတိုငျးပွုံးပွနှုတျဆကျသညျ။ ကြှနျမမှာသာ မလုံမလဲနဲ့ ခေါငျးငုံထားမိသညျ။ နောကျတော့နှဈယောကျသား ဆိုငျကယျလေးစီးကာ ကြောငျးကို သှားကွသညျ။ တဈနလေုံ့း ပပက ဘာမှ အမူအယာ ပကျြယှငျးတာမြိုးမရှိ။ ပုံမှနျအတိုငျးပငျနထေိုငျသညျ။ ကြှနျမလညျးမေးရငျကောငျးမလားဟုတှေးနပေမေဲ့ ဘယျက အစရှာရမယျမသိဖွဈနသေညျ။ တဈနတေ့ာ လုပျငနျးဆောငျတာတှပွေီးတော့ နှဈယောကျသား ဗီဒီယိုကားကွညျ့ကွသညျ။ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျ ထိုရုပျရှငျမှာ မငျးသမီးကို ပွနျပေးဆှဲဖမျးဆီးသော အခနျးပါသညျ။ ကြှနျမပါတျဝနျးကငျြကို မလြေ့ော့သှားအိသညျ။ ကွိုးတုပျခံထားရသော ထိုမငျးသမီးရဲ့ပုံကို ကွညျ့ပွီး ကြှနျမ ညက ပပရဲ့ပုံတှကေို ပွနျမွငျလာသညျ။ သူ့နရောမှာ ငါဆိုရငျကော ဘယျလိုနမေလဲဟုတှေးကွညျ့မိသညျ။ ကိုယျ့လကျကောကျဝတျလေးတှကေို စုပျနယျနမေိသညျ။ ဟဲ့ နှငျးဝေ နငျဘာဖွဈနတောတုနျး……။
မြိုးပပက ပုခုံးကို ပုတျပွီး ချေါလိုကျမှ တုနျတုနျယငျယငျနဲ့သတိပွနျဝငျလာသညျ။ စိတျတှကေ လှုပျရှားနစေဲ။ နှငျးဝေ နငျဘာတှဖွေဈနတောလဲ တဈနလေုံ့း ငိုငျနတေယျ ငါ့ကို ပွောပါ၍ီး ဘာတှဖွေဈနလေဲလို့…….။ ပပက ကြှနျမလကျဖဝါးလေးကို စုပျကိုငျကာမေးသညျ။ ကြှနျမ ညက သူမကို မွကျတဲ့အကွောငျးပွောပွလိုကျသညျ။ ကြှနျမစကားဆုံးတော့ ပပက သကျပွငျးခသြညျ။ ပပ ဟိုလူကွီးကနငျ့ကို ဘာလို့အနိုငျကငျြ့နတောလဲ။ နငျကကောဘာလို့ ငွိမျခံနရေတာလဲ။ သဘောကျလို့…..။ ဘာရယျ…….။ ဟုတျတယျနှငျးဝေ………။ ငါ အနိုငျကငျြ့ခံရတဲ့ အခါ၊ လှတျမွောကျဖို့အခှငျ့အရေး အရှိအောငျခြုပျနှောငျခံရတဲ့အခါ ရတဲ့ ခံစားမှုကို ကွိုကျလို့…….။ ပပက ခေါငျးလေး ငုံပွီးဖွတေယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျမကို မေးတယျ။ ငါ့ကို အထငျသေးသှားပွီလား နှငျးဝေ…..။ ငါအထငျမသေးပါဘူး ပပရယျ။ ကြှနျမ အဆုံး ကြှနျမနဲ့သူမ တဈယောကျကို တဈယောကျ ဖတျထားမိသညျ။ နငျ့ဆီမှာ ဘာလို့အဲ့လို စိတျမြိုးရှိနရေတာလဲ……..ပပရယျ။
မြိုးပပတို့ မိသားဆုဟာ ကြိကြိတတျမခမျြးသာကွပမေဲ့ အလယျအလတျတနျးစားထကျတော့ ပိုပွညျ့စုံပါတယျ။ ပွီးတော့ မြိုးပပဟာ တဈဦးတညျးသော သမီး။ မိသားစုတှရေဲ့ အလိုလိုကျအကွိုကျစောငျ ခွငျးကို ခံရတာပေါ့ အရာရာပွညျ့စုံနတေဲ့ မြိုးပပတဈယောကျ ပညာရေးတက်ကသိုလျတတျနစေဉျ အသကျ ၁၉နှဈအရှယျမှာ ပဲထူးဆနျးတဲ့ အရာတှစေိတျထဲဝငျလာခဲ့တယျ။ Internet googleတို့ရဲ့ အကူ အညီနဲ့ သူမစိတျတှဟော သီးခွားကမ်ဘာတဈခုကို ခွခေမြိသှားတယျ။ လူ့အခှငျ့အရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးမရှိရာ၊ လှတျမွောကျခှငျ့မရှိသော ခြုပျနှောငျခွငျးမြားနဲ့ကမ်ဘာပေါ့။ ကိုယျနောကျစိတျမလိုကျတော့ စိတျနောကျကိုယျလိုကျရသညျ။ ကိုယျ့အခနျးတံခါးကိုယျပိတျကာ ခွထေောကျနှဈဖကျကို ကွိုးနဲ့တငျးကပျြနအေောငျခညျြသညျ ။ လကျတှကေိုတော့ ကိုယျ့ပါကိုယျခညျြမရပမေဲ့ တငျးကပျြနသေော အနအေထားရောကျသညျအထိ ရဈပတျကာ အကဉျြးသူလေးလိုနထေိုငျခဲ့ဘူးသညျ။ သို့သျောစိတျရဲ့ အလိုစန်ဒမြားက ပွညျ့ဝမှုမရှိ။ နောကျတော့ တာဝနျကရြာရှာကလေးစီရောကျလာသညျ။ ရောကျပွီး သိပျမကွာ သူမဘဝ ပွောငျးလဲမဲ့ဖွစိရပျတဈခုဖွဈခဲ့သညျ။ မှတျမှတျရရ နှငျးဝေ မွို့တတျကာ လစာသှားထုတျသညျ။
သူမတဈယောကျထဲ အိပျခနျးထဲတှငျ self-bondageလုပျနသေညျ။ ထိုနမှေ့ ကိုအောငျကြျော အုနျးထမငျးခကျြသဖွငျ့သူမတို့ကို လာပို့သညျ။ အိမျရှကေ့ အသံပေးသျောလညျး ဘယျသူမပွနျမထူးသဖွငျ့ စိတျပူကာ အပျေါထပျအိပျခနျးရှိရာ တတျအလား ကွိုးမြားဖွငျ့ ရဈပါတျလုံးထှေးနသေော သူမကို တှသှေ့ားလတေော့သညျ။ ပထမတော့ ညီမလိုခငျရသော မြိုးပပကို စိတျပူသှားမိသညျ။ထို့ကွောငျ့ အနားကို ကပျသှားပွီး ကွိုးဖွပေေးဖို့လုပျမှ လကျကောကျဝတျမှကွိုးတှကေ ခညျြထားတာမဟုတျပဲ ကိုယျ့ပါကို လိမျကဈြထားကွောငျး တှသေ့ဖွငျ့အခွအေနကေို ရိပျစားမိသှားသညျ။ ထို့ကွောငျသူ နရောမှ လှညျ့ထှကျသှားရာ ခွထေောကျမှကွိုး တှကေို အသညျးအသနျ ဖွညျနရောမှ ခေါငျးကိုမော့ကာ ကိုအောငျကြျော………….. သူမချေါသံကွောငျ့ကိုအောငျကြျောက လှညျ့ကွညျ့ကာ စိတျခပြါ အကို ဘယျသူ့ကိုမှ မပွောပါဘူး…….။ မငျးစိတျထဲ ဘာတှရှေိနလေဲ အကို သိပါတယျ။ တဈကယျလို့ မငျးစိတျဖွဖေို့အကူ အညီ လိုမယျ ဆိုရငျတော့ ငါ့စီလာခဲ့ပါ။ ပွောပွီသူလှညျ့ထှကျသှားသညျ။
ကိုယျ့ကိုကိုယျမှားသလားမှနျသလားပငျ ကြှနျမမတှေးနိုငျတော့ ။ ထိုနကေ့ ည၉နာရီလောကျကွီး ကိုအောငျကြျောရှိရာ အိမျကို ကူးခဲ့သညျ။ ဒေါကျ ဒေါကျ ဒေါကျ ဖွညျးဖွညျးသာခေါကျသညျမို့ တံခါးခေါကျသံက တိုးညှငျးပမေဲ့ သူကွားပါလိမျ့မညျ။ ဖွညျးငွငျးစှာ ပှငျလာသော တံခါးရဲ့ အသံဟာ အေးစကျတောငျ့ခဲနသေညျ။ မြိုးပပ ကြှနျမ ရောကျလာလိမျ့မယျဆိုတာ ကွိုသိထားသလိုမြိုးသူက ရရှေတျတယျ။ ပွီးတော့ သူကပွောတယျ။ မငျး ဒီအိမျထဲဝငျလိုကျတာနဲ့ ငါ့လကျထဲက အရုပျကလေးဖွဈသှားပွီ။ မငျးရဲ့ သိက်ခာတရားတှေ မာနတှေ အားလုံးကို အိမျရဲ့အပွငျဘကျမှာထားခဲ့။ အိမျထဲဝငျလိုကျတာနဲ့ မငျးဟာ ငါပွုသမြှနုရမဲ့သူပဲ။ စဉျးစားပါ သခြောပွီဆိုရငျတော့ ဝငျခဲ့ ငါ့ အိပျခနျးထဲမှာရှိမယျ။ ပွောပွီး သူက လှညျ့ထှကျသှားသညျ။ ကြှနျမ လညျး လိုကျဝငျသှားလိုကျတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ လှုပျခတျနတေဲ့ စိတျဆန်ဒတှေ ပွပြေောကျ ခငျြတာကလှဲကငျ ကြှနျမစိတျထဲ ဘာမှမသိပါဘူး။ အိပျခနျးလေးထဲမှာ သူနဲ့ ကြှနျမ နှဈယောကျတညျး။ သူက ခုတငျစောငျးမှာ ထိုငျလို့။ ကြှနျမက သူ့ရှမှေ့ာ မတျတပျလေးရပျလို့ပေါ့။ မြိုးပပ…… သူ့ရဲ့ချေါသံက တိတျဆိတျနတေဲ့ ညအလယျမှာ ပို ကယျြတယျထငျရသညျ။ ကြှနျမခန်ဓာကိုယျလေးတုနျကနဲဖွဈသှားသညျ။ ဟို သတ်ေတာထဲမှာ ကွိုးတဈခှရှေိတယျ ယူလိုကျတဲ့… သူလကျညိုးထိုးပွရာ သတ်ေတာအဖုံးကို ဖှငျ့လိုကျသညျ။ အနီရောငျကွိုးတဈခှကေ ကြှနျမကို ကွိုဆိုနသေညျ။
ကြှနျမကောကျယူလိုကျသညျ။ သိပျမကွာခငျ ဒီကွိုးတှထေဲ ကြှနျမ လကျတှေ လှုပျမရအောငျ ဖွဈနလေိမျမယျထငျ့ရဲ့။ သူက ကြှနျမလကျနှဈဖကျနဲ့ ကမျးပတေဲ့ ကွိုးခှကေို ယူ ကာ နရောမှထလာသညျ။ ကြှနျမထကျခေါငျးတဈလုံးပို မွငျ့တဲ့သူ့ကို ကြှနျမ မော့ကွညျ့နရေသညျ။ သူက စကားတဈခှနျးမှ မပွောပဲ ကြှနျမလကျတှကေို ကွိုးနဲ့ပူးခညျြပွီး ကနျြနတေဲ့ ကွိုးစကို ထုတျတမျးမှာ ခညျြလိုကျတယျ ကြှနျမလကျတှေ မွှောကျလကျြသားပေါ့ မငျးငယျငယျက အရိုကျခံဖူးလား……။ ဟငျ့အငျး ကြှနျမ တဈခါမှအရိုကျမခံဖူးဘူး အကို….။ ဆရာမဖွဈလာတဲ့ အထိပေါ့……။ သူက မကျြခုံးကို ပငျ့တငျရငျးဆိုသညျ။ ကြှနျမခေါငျးငွိမျ့ပွမိသညျ။ လကျကိုလညျးလှတျလို လှတျငွားရုနျးနမေိသညျ။ မလှတျေုမာကျနိုငျမှနျးသိတော့ အားငယျလာသလိုလညျးခံစားရသညျ။ မငျးတပညျ့တှကေို ကောရိုကျဖူးလား။ အရမျးပွောရခတျရငျတော့ရိုကျပါတယျ။ အငျး မငျးဒီနဝေ့ဋျလညျပွီ………။ပထမဆုံး အနနေဲ့ မငျးကိုယျပျေါ အလြိုးရာတဈခြို့တငျပေးဖို့ စီစဉျထားတယျ။ သူကြှနျမကို ရိုကျတော့မှာပေါ့ ။ ကြှနျမစိတျလှုပျရှားမိသညျ။ ဒါနဲ့ ကြောငျးဆရာ အမြားစုက ဘာလို့တငျပါးကို ပဲရိုကျကွလညျးသိလား။ ကြှနျမ ခေါငျးခါပွမိသညျ။ တဈကယျလညျး သိမှမသိပဲ။
အဲ့နရောက အသားမြားပွီး ရိုကျလို့ကောငျးလို့လေ။ အထူးသဖွငျ့မငျးလိုတငျပါးမြိုးလေ။ ဟုဆိုကာ ကြှနျမတငျပါးကို လကျနဲ့ ပုပျသညျ။ သာမနျအခြိနျဆို တဈခုခုတုံပွနျမိမှာ။ အခုက လကျတှကေ ရှိသာရှိသညျ သုံးမရတဲ့ အခွအေနေ။ သိမျငယျမှုကိုခံစားရသညျ။ သူက ခေါငျးအုံးအောကျထညျ့ထားတဲ့တဈစုံတဈရာကို ယူကာ လထေဲဝှရေ့မျးလိုကျသညျ။ ဝှဈ…ကနဲအသံကကြောခမျြးစရာ။ သခြောကွညျ့တော့ ဝိုငျယာကွိုးကို တိပျနဲ့ ပတျကဈြထားသောကွိုးတဈခြောငျး။ သူက ကြှနျမရဲ့ကြော ဘကျကို နရောယူသညျ။ ဝှဈကနဲ့ သံကို ကွားလိုကျရပွီး သုပဈမှတျထားရာ ကြှနျမတငျပါးတှေ ပူကနဲခံစားလိုကျရသညျ။ နာကငျြမှုကွောငျ့ကိုယျကလေးရမျးကာ ရုနျးကနျမိသညျ။ သူကထကျမရိုကျ ကြှနျမငွိမျသှားသညျအထိစောငျ့နသေညျ။ ပွီးမှနောကျတဈခကျြ။ ခပျဖွေးဖွေးတိုကျခတျနတေဲ့ ညနခေငျးရဲ့လပွေမှော သူမထဘီအနားစတှေ လှုပျခတိနသေညျ။ ဟိုးအဝေးမဗာ ကောငျးကငျပွာပွာ တိမျစိုငျဖွူဖွူတှေ ။နောကျ သူမခဈြသော တောငျးတနျးပွာတှေ ။ ဘယျလောကျကွီးသော အပူကိုမစို ငွိမျးသကျပေးနိုငျသော သဘာဝပါတျဝနျးကငျြဟာ လကျရှိသူမရငျက အပူကို မကွိမျးအေးစနေိုငျပါ။
ဟူးကနဲ ရှူထုတျလိုကျတဲ့သကျပငျြးမှာ စိတျဆိုးစိတျညဈတှပေါသှားရငျကောငျးမယျဟု သူမတှေးမိသညျ။ မြိုးမမပွောပွသော အကွောငျးအရာတှကေ သူမစိတျကို စိုးမိုးထားနိုငျလှနျးသညျ။ မကွာခငျ မှောငျတော့မညျ။ ပွနျသငျ့ပွီဟုတှေးကသူမဆိုငျကယျလေးနဲ့ ပွနျခဲ့သညျ။ ဆိုငျကယျလေးကိုခွံထဲရပျလိုကျတော့ အမှိုကျတှကေို မီးရှို့နတေဲ့ ကိုအောငျကြော့ ပွုံးကာနှုတျဆကျသညျ။ နောကျကတြယျနျော မနှငျးဝေ ဘယျတှဝေငျနတောလဲ သူမပွုံးရုံသာ ပွုံးပွမိသညျ။ ကြျောထှကျလာသော သူမကို ကိုအောငျကြျော နားမလညျစှာကွညျ့နမှောသိသညျ။ အိမျထဲရောကျတော့ မြိုးပပ ကသူမကို စိတျမကောငျးဟနျနဲ့ကွညျ့သညျ။ နှငျးဝခေုံမှထိုငျတော့ သူမ ပုခုံးကို ကိုငျကာ ငါမပွောပွခဲ့ရငျပေါငျးသား နှငျးဝရေယျ။ ငါ့စိတ်တဇထဲနငျ့ပါ ဆှဲသှငျးမိသလိုဖွဈသှားပွီ……..။ ငါ့မှာကို စိတျအခံရှိတယျထငျပါတယျ ပပရယျ။ ငါအခု ဘာလုပျရမှနျးကို မသိတော့ဘူး။ ပပသူမကို တှတှေလေေးစိုကျကွညျ့တယျ။ ပွီးမ သကျပငျြးကိုခကြာ…..။ နှငျးဝေ ငါနငျ့ဘဝကို ငါ့လိုဖွဈသှားအောငျစှယျတာမဟုတျဘူးနျော။ နငျစမျးသပျကွညျ့မလား…..။ ငါ…… ငါကွောကျတယျ။ ငါလညျးရှိမှာပဲ နှငျးဝရေယျ နငျတဈယောကျထဲမှမဟုတျတာ။ ပွီးတော့ နငျ့စိတျနငျလညျးသိရတာပေါ့ သာမာနျစိတျလှုပျရှားတာလား တဈကယျကို အဲ့စိတျရှိနလေားဆိုတာ…..။
နငျ…..နငျကောငျးသလိုသာလုပျတော့ဟာ…….။ ခဏစောငျ့ဟု…..ဆိုကာ ပပ အပွငျထှကျသှားသညျ။ သိပျမကွာပွနျဝငျလာသညျ။ နငျစမျးကွညျ့ခငျြရငျ အဆငျ့ပွငျပွီးစောငျ့နပေါတဲ့ ခဏနရေငျသူလာခဲ့မယျတဲ့…..။ နငျမစမျးခငျြဘူးဆိုရငျတော့ ပွနျလာပွောပါတဲ့……. ဘယျလိုလဲ နငျ့သဘော။ အဆငျသငျ့ပွငျ ငါက ဘာတှပွေငျရမှာလဲ…….။ ဘာမှလုပျစရာမလိုဘူး ငါယလေုပျပေးသမြှ အရုပျကလေးလို ငွိမျနရေုံပဲ။ အရုပျကလေးလိုတဲ့ နှငျးဝရေငျမှာ လှိုကျကနဲ……။ သူမပွုံးရုံလေးပွုံးကာ ခေါငျးငွိမျ့ပွလိုကျသညျ။ ပပကသူမကို ထူကာ ရေးခြိုးစသေညျ။ နောကျအဝတျအစားသပျသပျရပျရပျဝတျကာ ဖွီးလိမျးပေးသညျ။ ဆံပငျကိုလဲ ဆံထုံးလေးထံးပေးသညျ။ သူမကိုယျတိုငျလဲထိုသို့ပွငျဆငျသညျ။ နောကျနှဈယောကျသားဧညျ့ခနျးမှာ ထိုငျစောငျ့နကွေသညျ။ ည ၇ နာရီတိတိမှာ ကိုအောငျကြျောဝငျလာသညျ။ နှငျးဝကေော ပပပါ မတျတပျထရပျလိုကျကွသညျ။ ကိုအောငျကြျောက အိမျရဲ့ တံခါးမကွီးကို အတှငျးမှလော့ခလြိုကျသညျ။ နောကျသူတို့နဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျမှာဝငျထိုငျသညျ။ နှငျးဝေ ရှငျ……. ရုတျတရကျချေါလိုကျတော့ သူမခန်ဓာကိုယျလေးတုနျကနဲဖဈသညျအထိ လနျ့သှားသညျ။ မငျးအခုခြိနျကစပွီး ငါ့ရဲ့ ကြေးကြှနျဖွဈသှားပွီ နားလညျလား….။
မြိုးပပ ကြှနျမနောကျလာရပျသညျ။ ဟူးကနဲသကျပွငျးခသြံကို ကွားလိုကျရသညျ။ နောကျသူမကကြှနျမလကျတှကေို ကြောဘကျသို့လိမျယူလိုကျသညျ။ အ ကြှနျမရဲ့ အျောညညျးသံကွောငျ့ ပပက ဆျောရီးဟုတောငျးပနျသညျ။ ပပ မငျးသူ့ကို တောငျးပနျစရာမလိုဘူး။ သူ့ကို နာအောငျလုပျ ကွိုးကို တငျးနအေောငျခညျြ သူ့အျောသံကို ကွားခငျြတယျ။ တုပျတုပျမှမလှုပျနိုငျတဲ့ ကြှနျမကို သူက အရသာခံကွညျ့နတေယျ။ ပွီးတော့ ပပကို တဈစုံတဈရာ ထပျပေးလိုကျတယျ။ခှေးလညျပါတျလေးတဈခု ကြှနျမလညျတိုငျကြော့ကြော့ပျေါထပျရောကျလာသညျ။ လညျပါတျကသညျ သံကွိုးငယျလေးသူက ခုံပျေါက ကိုငျထားတယျ။ နောကျတဈခကျြစောငျ့စှဲလိုကျရာ လကျပွနျကွိုးတုပျခံထားရသူ ကြှနျမကွမျးပွငျပျေါ ဒူးထောကျကသြညျ။နာကငျြမှု ဝမျးနညျးမှုကွောငျ့ကြှနျမ မကျြရညျဝဲလာသညျ။ ပပ ကျောဖီသုံးခှကျဖြျောပွီး အပျေါလိုကျခဲ့…….
အမိနျ့ပေးပွီး ကြှနျမကို သံကွိုးက ဆှဲကာ အပျေါတတျသှားသညျ။ ကြှနျမလညျးနောကျက ယိုငျတိယိုငျတိုငျလိုကျရတာပေါ့။ အခနျးထဲက ကြှနျမနဲ့ ပပရဲ့ နှဈယောကျအိပျခုတငျစောငျးမှာ သူကထိုငျပွီး ကြှနျမကတော့ သူ့ရှကေ့ ကွမျးပွငျမှာ ဒူးတုပျထိုငျရသညျ။ ခဏနတေော့ ပပတဈယောကျ ကျောဖီဗနျးလေးကိုငျကာတတျလာသညျ။ ဗနျးလေးကို ကိုအောငျကြေျာ့နဘေးမှာ တရိုတသခေကြာ ကြှနျမဘေးမှာ ဒူးတုပျကာလာထိုငျသညျ။ ကိုအောငျကြောက ကျောဖီခှကျတဈခုထဲဆေးတဈလုံးထညျ့ကာမှနေသေညျ။ ပွီးတော့ ပပကို ပေးကာ ကြှနျမကို တိုကျစသေညျ။ ကျောဖီတှကေုနျသှားတော့ ကြှနျမကို ကွိုးဖွညျပေးသညျ။ ပွီးတော့ အဝတျတှေ တဈခုမကနျြခြှတျစသေညျ။ ကြှနျမရဲ့လကျကလေးတှနေဲ့ ဖှံ့ထှားတဲ့ အင်ျဂါတှကေို ဖုံးကှယျဖို့ကြှနျမကွိုးစားတယျ။ ဒါပမေဲ့သူက ကြှနျမကို ခုတငျပျေါဆှဲတငျကာ ပါတျလကျလှနျစပွေီး လကျနှဈဖကျကို ဘေးသို့ဆှဲကားကာ ခုတကျတိုငျတှမှော ကွိုးနဲ့ ခညျြလိုကျသညျ။ ခွထေောကျတှလေညျးထိုနညျး လညျကောငျး………။ကြှနျမဟာ ခုတငျပျေါမှာ ခွကေားယားလကျကားယားပေါ့။ လညျပငျးက လညျပါတျကိုတော့ ခဏဖွုတျပေးထားသညျ။
ခဏကွာတော့ ကြှနျမစိတျတှေ လှုပျရှားလာပွီး ကိုယျအင်ျရာအစိတျအပိုငျူတလေကနေ ယားယံငေါ ဝဒေနာကို စတငျခံစားလာရသညျ။ ကြှနျမကို ကြှနျမ ဘာဖွဈနမှေနျးမသိ။ ဝဒေနာက ပိုပို ပွငျးလာသညျ။ သူက ကြှနျမနားလြှောကျလာကာ ဘယျလိုလဲ နှငျးဝေ နလေို့မှကောငျးရဲ့လား…။ နငျ့ကို ကာမစိတျကွှဆေးတှေ တိုကျထားတာလေ……..။ ကြှနျမပွနျမဖွနေိုငျ ရငျတဈခုလုံးမောဟိုကျနသေညျ။ သူ့လကျတှကေ ကြှနျမခန်ဓာကိုယျကို ပှတျသပျနပွေီး နို့သီးခေါငျးလေးကို လကျညိုးလကျမနဲ့ဖိညှဈလိုကျသညျ။ အား……. နာကငျြမှုကွောငျ့ ကြှနျမ ခေါငျးတဈခါခာနဲ့ အျောမိသညျ။ ခံစားနရေသော ဝဒေနာ အနညျးငယျ သကျသာသလိုတော့ရှိသညျ။ မငျးလိငျမဆကျဆံရငျ ဒါမှမဟုတျ အာသာမဖွရေငျ တဈညလုံးရူးလောကျအောငျ ခံစားရတော့မှာ…။ မငျးကို ဒီတိုငျးထားလိုကျရမလား မလုပျပါနဲ့ရှငျ ကြှနျမကို အာသာဖွခှေငျ့ပေးပါ…..။ ကြှနျမ အရူးတဈယောကျလို အျောဟဈတောငျးပနျမိသညျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျမပါးစပျကို တိပျနဲ့ကပျလိုကျတညမို့ ဝူးဝူးနဲ့သာ အသံထှကျနိုငျသညျ။ နောကျတော့ သူ့လကျစှဲတျော ကွာပှတျလေးနဲ့ ကြှနျမခန်ဓာကိုယျအနှံကို ရိုကျနှကျပါတော့သညျ။ လှတျလှတျကြှတျကြှတျဖွဈနသေော ရငျသားတှသောမက တဈခါတဈခါ ပေါငျကွားက အင်ျဂါနုနုလေးကို ပါလာထိသညျ။ အရညျကွညျလေးတှစေိမျ့ထှကျလာသညျ။ နာကငျြမှုကွောငျ့ စိတျတှေ ပွလြေော့သှားသလိုရှိပမေဲ့ ယားယံမှုက ရှိစဲပငျ ။
နောကျတော့ ကို အောငျကြျောက ပပကို လကျပွနျကွိုးတုပျကာ သှား နငျသူငယျခငျြးကို ပါးစပျနဲ့ ပွုစုပေးလိုကျဟု အမိနျ့ပေးသညျ။ ပပလညျး အမိနျ့အတိုငျး ခုတငျပျေါတတျလာတာပေါ့ ပထမဆုံး ကြှနျမရဲ့ ရငျသားတှကေို လြှာနဲ့ရပျလိုကျ စို့လိုကျလုပျသညျ။ နောကျတဖွညျးဖွညျးနဲ့အောကျဆငျးသှားပွီး ပူစီလေးကို လြှာနဲ့ရပျပေးပါသညျ။ တဈခါမှာ မကွုံဖူးတဲ့ ခံစားမှုကွောငျ့ အပြိုမလေးကြှနျမ မူးမူးမမေ့ေ့ ။ နောကျတော့ တဈကိုယျလုံးပြော့ခှတေဲ့အထိခံစားလိုကျရသညျ။ လကျကောကျဝတျမှာ ထငျနသေော ကွိုးရာလေးကို ကွညျ့ပွီး နှငျးဝေ အတှေးနယျခြဲ့နသေညျ။စနနေမေို့ ကြောငျးပိတျသညျလေ….. ဟဲ့ မယျမငျးကွီးမ ဘာတှတှေေးနတောတုနျး……။ အနောကျကနေ ပခုံးပုတျပွီး ချေါတော့ နှငျးဝေ ဆကျကနဲတုနျသှားသညျ။ ပပ….လနျ့တာဟာ……. နောကျမှလနျ့ သှား……ရသှေားခြိုး….. ကိုအောငျကြျောက သူမွို့တတျရငျလိုကျခဲ့တဲ့…….. ။ ဟဲ့သူက ငါ့ဘယျချေါသှားမှာတုနျး……..။ သိခငျြသူ့သှားမေးလေ……။ နှငျးဝကေ ကွောကျလနျဟနျနဲ့ ပခုံးတှနျပွတော့ ပပကရယျသညျ။ နှငျးဝလေဲရလေဲထဘီလဲကာ ရခြေိုးခနျးဝငျခဲ့သညျ။ ရခြေိုးပွီး အခနျးပွနျ မှနျတငျခုံရှအေ့လှ ပွငျနတေုနျး ပပကနောကျနသေိုငျးဖကျသညျ။ နငျ့ကိုယျလုံးလေး သိပျလှတာပဲနှငျးဝရေယျ ငါညကမှသိတာ ဟာ…. ဘာတှပွေောနတောလဲ ရှကျသှားသဖွငျ့ နှငျးဝမေကျြနှာလေး နီရဲသှားကာ ပပကို လကျနောကျပွနျ ဆှဲဆိတျသညျ။ ပပရယျ ရယျရငျးရှောငျလိုကျသညျ။
ခြှငျ ခလြှငျ….. ဘာသံတှတေုနျး နှငျးဝရေဲ့ အမေးကို ပပက ရယျကြဲကြဲနဲ့ ဘာသံထငျလို့တုနျးလို့ပွနျဖွတေယျ။ ငါသံကွိုးသံကွားလိုကျတယျ ဘယျကလဲတော့မသိဘူး…..။ ဒီကလေ….. ပွောပွောဆိုဆို ပပက အဖွူရောငျဂါဝငျလေးက ပေါငျးရငျးထိမတငျလိုကျသညျ။ ပေါငျလယျမှာ သူမရဲ့သှယျစငျးတဲ့ ပေါငျနှဈခြောငျးကို ခြုပျနှောငျထားသော လကျထိပျချေါမလား ခွကေငျြးချေါမလားအရာတဈခု။ ပေါငျမှာ ပတျထားသော ကှငျးကို သရနေဲ့ပွုလုပျထားပွီး sizeက လိုသလို အတိုးအလြော့လုပျနိုငျသညျ။ အလှယျတကူ ဖွုတျမရရောငျ သခေ့လောကျလေးမြားနဲ့ခတျထားသညျ။ အလယျကနေ မတိုလှနျးမရှညျလှနျးသော သံကွိုးလေးဖွငျ့ဆကျထားသညျ။ လှုပျရှားမှုတှကေို လုပျနိုငျပမေဲ့ ခပျမွနျမွနျသှားစရာရှိရငျတော့ ကြိနျးသစေိတျအနှောကျအယှကျဖွဈစမေဲ့ ပစ်စညျးတှေ……။ နငျက မနကျစောစော သှားခစားခဲ့တယျပေါ့…….။ ဟိုက ကွိမျစင်ျကွနဲ့ ရိုကျချေါတာကိုးဟ……။နငျ့အတှကျလဲ လကျဆောငျပါသညျ။
လမျးလြှောကျရတာ ခွလှေမျးမမှနျခငျြ။ သူမရဲ့ အရှကျနဲ့ သိက်ခာ အားလုံး ကိုအောငျကြေျာ့လကျ အပျထားရသညျ မဟုတျလား။ လူပုံအလယျမှာ တုနျခါစကျတဈခု ပငျတီထဲထညျ့ဝတျပွီး လမျးလြှောကျရလိမျ့မယျလို့ ဘယျတုနျးကမှ မတှေးမိခဲ့ ။ ခုတော့ နှငျးဝဆေိုတဲ့ သူမ အပွငျပနျးကွညျ့ရငျ ရငျဖုံးအကငြ်္ီခြိတျထဘီနဲ့ အိနွေ်ဒရှငျပေါ့။ ထဘီထဲမှာတော့ တုနျခါစကျအစှမျးကွောငျ့ စိုစိစိဖွဈနသေော ပငျတီတဈထညျ။ ဒီကွားထဲ မကျြနှာ မပကျြအောငျ ထိနျးရသေးသညျ။ နကေ သူမအတှကျပို ပူနသေညျထငျရသညျ။ သူမအပျေါ ကွညျ့နသေော မကျြလုံးတိုငျးကို ကွောကျမိနသေညျ။ ကို အောငျကြျောကတော့ ဘေးမှာ လလေေးတဈခြှနျခြှနျနှငျ့ ခလုတျကို ပိတျလိုကျဖှငျ့လိုကျ။ ဝယျထားတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ကုနျကားနဲ့ ရှာကို လမျးကွုံတငျပေးပွီးတော့ ကို အောငျကြျောက သူမကို ဆိုငျကယျနဲ့ တဈနရောချေါသှားသညျ။ ခွံကယျြကွီးတဈခု……… ။ သူက အသငျ့လူချေါဘလျကို နှိပျလိုကျတော့ ခွံစောငျ့ဖွဈ ဟနျ တူသူ တဈယောကျထှကျလာသညျ။ သော့ဖှငျ့ပေးပွီး သော့ကို သူ့လကျအပျကာ ထှကျသှားသညျ။ နှငျးဝေ တဈယောကျ ယောငျလညျလညျနဲ့ အိမျထဲလိုကျဝငျခဲ့သညျ။ အိမျဆောကျထားတဲ့ ပုံက ရှေးဆနျပွီး ခနျးနားလှသညျ။ ဟောငျးနပေမေဲ့ ခိုငျခံ့နသေေးသညျ။
ကြှနျမကို ဘာလို့ ဒီကို ချေါလာတာလဲ နှငျးဝရေဲ့ မအောငျ့နိုငျအောငျ မေးလိုကျတဲ့ အသံကွောငျ့ ကို အောငျကြျောလှညျ့ကွညျ့သညျ။ ထို့နောကျ သူ့အိပျထဲက တဈစုံတဈရာကို ဆှဲထုတျလိုကျသညျ။ နောကျ ထို အနာကို စုပျကိုထားတဲ့ လကျသီးစုပျလေးသူမရှိရာကို ကမျးလိုကျသညျ။ လကျတှကေို ဖွညျးဖွညျးခငျြးဖွညျလိုကျသညျ။ လကျဖဝါးပျေါမှာ လကျစှပျလေးတဈကှငျး……..။ မငျး တဈသကျလုံး ငါ့အတှကျ အသကျရှငျပေးနိုငျမလား နှငျးဝေ…….. အသံက နူးညံသညျ။ အမိနျ့သံမပါ။ သို့သျော သူမနားထဲ အမိနျ့တဈခုလို ကွားသညျ။ သူ သူမကို လကျထပျခှငျ့တောငျးနတောပဲ။ လကျထပျခွငျးဆိုတာ နှငျးဝေ ဘယျတော့မှ ခေါငျးထဲမထညျ့ရသေးတဲ့အရာ။ ရုတျတရကျသူမ ဘာပွနျပွောရမညျမသိ။ ပွီးတော့ သူ့ရဲ့ ပိုငျစိုးပိုငျနငျးပွောပုံကွောငျ့ အောငျ့သကျသကျခံစားရသညျ။ မိနျးမက မိနျးမပဲလေ……။ ကြှနျမ စဉျးစားပါရစဦေး……။ ထိုနကေ့ ထိုကိစ်စ ထိုမြှနှငျ့ရပျသှားသညျ။ ကိုအောငျကြျောက သူမကို အိမျအနှံ့ ခွံအနှံ့လိုကျပွသညျ။
ကြောခမျြးစရာ…..။ လူတဈယောကျကို ပုံစံမြိုးစုံနှငျ့ ခြုပျနှောငျနိုငျသော ကိရိယာမြား လှောငျအိမျမြား ကွာပှတျမြား မြိုးစုံလှနျးသညျ။ သူကပွောသေးသညျ။ သူ့အခဈြကို သာလကျခံရငျ သူမတဈသကျလုံး ဒီအိမျမှာနရေမှာတဲ့…….။ ညရောကျတော့ပပနဲ့ တိုငျပငျဖွဈသညျ။ ပပက မကျြလုံးလေးပွူးပွီး အံသွလို့။ ပပနဲ့ ကို အောငျကြျော ထိတှခေဲ့တဲ့သကျတမျးတဈလြှောကျ ဘယျတုနျးကမှ စိတျဝငျစားတဲ့ အရိပျအယောငျမပွခဲ့ ဖူးဘူးတဲ့။ ဒီလိုဆိုတော့လညျး နှငျးဝေ ကွညျနူးရပါသညျ။ ကြောငျးတှပေိတျတဲ့ နှရောသီ တဈခုမှာ သူမ ကို အောငျကြေျာ့ကို အဖွပေေးခဲ့သညျ။ နောကျရှာမှာပဲ အကဉျြးရုံး ပွုလုပျကာ ကို အောငျကြျောရဲ့ အိမျကလေးဆီလိုကျသှားခဲ့သညျ။ အဲ့ဒီမှာ လှောငျအိမျလေးတှေ လကျထိပျလေးတှေ သူမကိုစောငျ့နလေိမျ့မညျ။ ပပကတော့ သူမတို့နှဈဦးကို နှုတျဆကျက တာဝနျကရြာ နောကျတဈရှာကို ကူးသှားသညျ။ တဈနေ့ သူမမှာလဲ စိတျတူရာ လူတဈယောကျရှိလာလိမျ့ဦးမညျ။
အံသြစရာမြင်ကွင်းကြောင့်မျက်လုံးပြူးမိသည်။ အတွင်းမှာ ကိုအောင်ကျော်နှင့်အတူ မျိုးပပ ရှိနေပြီး မျိုးပပရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်တွေကို ပူးကာ အောင်ကျော်က ကြိုးနဲ့ စိမ်ပြေနပြေ ချည်နေခြင်းကြောင့်ပင်။ ကျွန်အော်ဟစ်ဖို့ ကြံလိုက်ပေမဲ့ ထူးဆန်းနေသော မျိုးပပကြောင့်မအော်ဖြစ်။ လက်နှစ်ကို သူတပါးက ကြိုးတုပ်နေတာတောင် ပါးစပ်ကအားနေပေမဲ့ မျိုးပပအော်ဟစ်ခြင်းမရှိ။ ရုန်းကန်ခြင်းမရှိ။ ရဲစခန်းမှာ သွားရောက် အဖမ်းခံသော အပစ်သားလို လိုက်လိုက်လျောလျောရှိနေခြင်းပင်။ ကြိုးချည်ကြီးတော့ ပိုနေသော ကြိုးစအရှည်ကို ထုတ်တန်းပေါ်ပစ်လျိုပြီး တစ်ဖက်က ပြန်ကျလာသောကြိုးစေကစောင့်ဆွဲလရာ ပပတစ်ယောက် လက်မြှောက်လျက်သားဖြစ်သွားသည်။ အောင်ကျော်က မကျေနပ်သေး ထပ်ပြီး ဆွဲလိုက်ရာ ခြေဖျားထောက်အနေအထားဖြစ်သွားတော့မှ ကြိုးစကို အနီးက ခုတင်တိုင်မှာ ချည်လိုက်သည်။ ပပနှုတ်မှာ ကြိုးကို ဆွဲလိုက်ချိန်လက်တွေနာသွားသဖြင့် အ ဟုအော်ဟစ်ရုံမှအပ တခြားတုံ့ပြန်မှုမရှိ ။
မျိုးပပတစ်ယောက်လက်တွေမြှောက်ထားရတော့ ကျစ်လစ်သွယ်လျသောကိုယ်နေဟန်ထားက ပေါ်လွင်နေသည်။ အပေါ်ဝတ်ရင်ဖုံးလက်ရှည်လေးက အနည်းငယ်ပါးသဖြင့် အောက်ခံဘ်ာလီကိုပင်မြင်နေရသည်။ ခါးကို ကျစ်လစ်စွာစည်းနှောင်ထားသော အထက်ဆင်စကို အောင်ကျော်က ဖြုတ်ချလိုက်သဖြင့် လုံချည်လေး ပန်းနုခြေရင်းမှာပုံကျသွားသည်။ အောင်ကျော်က ပပရဲ့ ပင်တီကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ ကျောင်းမှာ အိနြေ္ဒရှိလှပါသည်ဆိုသော ပပ အောက်ပိုင်း အဝတ်ဗလာနှင့်ဖြစ်သွားသည်။ ကို အောင်ကျော်ရဲ့လက်တွေက အငြိမ်မနေ အဖုတ်လေးကို ပွတ်သပ်နှိုက်စွနေသည်။ ပပကတော့ခေါင်းလေးမော့ အံကို ကျိတ်ကာ ခံစားနေသည်။ ကြည့်နေရင်းပင် အောင်ကျော်က ပပရဲ့ အဲ့နေရာကို လက်ဖဝါးနဲ့ နှစ်ချက်လောက် ရိုက်လိုက်သည်။ ပပတော့ ဘယ်လိုမေသည်မသိ။ ဖောင်းကနဲအသံကြောင့် ကျွန်မပင်ရင်တွေတုန်မိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို တွန့်လိမ်နေသော ပပကို မြင်နေရသည်။ ကိုအောင်ကျော်က ပပကို ကျောပေးလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့သံသေတ္တာလေးထဲက တစ်စုံတစ်ရာကို ထုတ်ယူလိုက်သည်။ ထောင်မှန်စတုဂံပုံ လေးထောင့်တုံးလေးတစ်ခု။ အဲ့အတုံးလေးမှာ ဝိုင်ယာနဲ့ ဆက်ထားတဲ့ ဘဲဥပုံစက်ကလေးတစ်ခုလဲပါသည်။ကိုအောင်ကျောက လေးထောင်းတုံးလေးက တစ်စုံတစ်ရာကို နှိပ်လိုက်ရာ ဘဲဥပုံ စက်ကလေးက တွီကနဲ အသံခပ်ပါးပါးနဲ့တုန်ခါနေသည်။ ထိုတုန်ခါနေသောစက်ကလေးကို ပပရဲ့ ရင်သားပေါ်တို့ထိကစားနေသည်။
ပပခမျာ မျက်နှာလေးရှုံမဲ့ရင်း တအအနဲ့ ညည်းညူရင်းခံစားနေရရှာသည်။ ထို့နောက်ကိုအောင်ကျော်က ထိုဘဲဥပုံစက်လေးကို ပပရဲ့အဖုတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်သည်။ အားအအ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပပဆီက ညည်းသံအကျယ်ကြီးထွက်လာသည်။ အောင်ကျော်က ချက်ခြင်းမတ်တပ်ထကာ ပပရဲ့ ပါးနုနုလေးကို ဖြောင်းကနဲ ရိုက်ချလိုက်သည်။ နင်အဲ့လောက်အသံကျယ်နေရင် ဟိုဘက်က ဟာမကြားသွားဦးမယ် နင့်ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားရမယ်။ ကိုအောင်ကျော်က ပြောပြောဆိုဆို ကြမ်းပြင်ပေါ်က ပင်တီလေးကိုယူကာ ပပပါးစပ်ထဲထိုးထည့်သည်။ ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်မဝေါ့ကနဲပင် ပျို့တတ်မိသည်။ သို့သော်မျက်နှာမလွှဲမိ။ အောင်ကျော်က တွဲလောင်းကျနေတဲ့ လေးထောင့်တုံးလေးကို ပပရဲ့ ဘယ်ဘက်ပေါင်မှာကပ်ကာ တိပ်နဲ့ ပါတ်ချည်ထားလိုက်တယ် ပြီးတော့ တုန်ခါမှုကို အမြင့်ဆုံးပြောင်းလိုက်ပုံရသည်။ စက်အသံကို အနည်းငယ်ကျွန်မကြားနေရသည်။ ပြီးတော့ ခြေရင်းက ပပရဲ့ထဘီကို ပြန်ဝတ်ပေးသည်။ ခြေကျင်းဝတ်တွေကိုလည်းပူးကာ ကြိုးချည်လိုက်သည်။
ပပကတော့တွဲလောင်းလေးနဲ့ တွန့်လိမ်နေသည် ကိုအောင်ကျော်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပင် အရက်ကလေးသောက်ရင်း အရသာခံကာ တစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်နေသည်။ ပပတွန့်လိမ်နေရမှ ဝေဒနာကို မခံစားနိုင်လို့ထင်သည်။ လက်တွေကို ရုန်းကန်နေသည်ကို မြင်ရသည်။ ခြေဖျားထောက်အနေအထားဆိုတော့ ချိန်သီးလေးလို လှုပ်ရမ်းနေသည်။ သုမကိုကြည့်ရင်း ကျွန်မ အာခေါင်ထဲခြောက်ငပ်လာသလိုခံစားရသည်။ဝူးဝူးဝါးဝါး ညည်းသံတွေလည်းကြားနေရသည်။
ကျွန်မဒီနေရာကနေ ထွက်သွားသင့်ပြီးလို့ တွေးမိပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မလှုပ်ရှားမိ။ တွန့်လိမ်ရုန်းကန်နေသော ပပဆီကနေ မျက်လုံးအစုံကို မခွာနိုင်။ အနည်းငယ်အကြာမှာ ပပ ငြိမ်သက်သွားသည်။ ခံစားမှု အဆုံးအစွန်ကို ရောက်ကာ ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားပုံရသည်။ ကိုအောင်ကျော်ထိုင်နေရာမှထကာ ပပကို ကြိုးဖြည်ပေးဖို့ပြင်သည်။ ကျွန်မလည်းတော်သင့်ပြီဟုတွေးကာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ပြန်ခဲ့တော့သည်။
မနက်ခင်းဟာ ပုံမှန်အတိုင်း လည်ပတ်နေသည်။ ခု ကျွန်မရှေ့က ပပဟာ ညက မျိုးပပမဟုတ်တော့သလို တည်ငြိမ်နေသည်။ ယူနီဖောင်း အဖြူ အစိမ်းနဲ့ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် လှလှပပ အိနြေ္ဒရှင်မလေးပြန်ဖြစ်နေသည်။ ပုံမှန်အတိုင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မနက်စာကို စားသောက်လျှက်ရှိသည်။ ကျွန်မမှာသာ ညကပုံရိပ်တွေ မြင်ယောင်ရင်း ငိုင်နေမိသည်။ နှင်းဝေ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ နေမကောင်းဘူးလား…….။ ပပရဲ့မေးခွန်းကြောင့် ကျွန်မ ငိုင်နေမိရာ က အသက်ပြန်ဝင်လာတယ်။ ဟို….. ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး အဲ့တာဆိုလည်းစားလေ တော်ကြာကျောင်းနောက်ကျနေဦးမယ်။ ကျွန်မလဲ စားစရာရှိတာဆွဲပီး ဆွဲခင်စလေးဆွဲကာ ကျောင်းရှိရာသွားဖို့ပြင်ဆင်ရပါသည်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်က ဒီရွာလေးမှတာဝန်ကျတဲ့ကျောင်းဆရာမတွေပါ။ ကျွန်မထက်စာရင် မျိုးပပက စီနေရာကျပါတယ်။ ကျွန်မက ဒီရွာရောက်တာ စာသင်နှစ် တစ်နှစ်စာသာရှိသေးသည်။ ကိုအောင်ကျော် က ဒီခြံထဲမှာ အိမ်စောင့်သဘောမျိုးနေတဲ့သူ။ အိမ်က သူတို့မိသားစုပိုင်အိမ်ပါပဲ။ ကျန်မိသားစုတွေက မြို့တတ်နေထိုင်ကြပေမဲ့ သူကတော့ သူ့အိမ်လေးထဲမှာ နေကျန်ခဲ့သည်။ ဘွဲ့ရ ပညာတတ် နိုင်ငံခြားသွားပြီး ပညာသင်ဖူးသည်ဟုသိရသည်။
ခြံထဲမှာ တံမြက်စဉ်းလှဲနေတဲ့ ကိုအောင်ကျော်ကိုတွေ့ရသည်။ သူကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပြုံးပြနှုတ်ဆက်သည်။ ကျွန်မမှာသာ မလုံမလဲနဲ့ ခေါင်းငုံထားမိသည်။ နောက်တော့နှစ်ယောက်သား ဆိုင်ကယ်လေးစီးကာ ကျောင်းကို သွားကြသည်။ တစ်နေ့လုံး ပပက ဘာမှ အမူအယာ ပျက်ယွင်းတာမျိုးမရှိ။ ပုံမှန်အတိုင်းပင်နေထိုင်သည်။ ကျွန်မလည်းမေးရင်ကောင်းမလားဟုတွေးနေပေမဲ့ ဘယ်က အစရှာရမယ်မသိဖြစ်နေသည်။ တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား ဗီဒီယိုကားကြည့်ကြသည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ထိုရုပ်ရှင်မှာ မင်းသမီးကို ပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးသော အခန်းပါသည်။ ကျွန်မပါတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့လျော့သွားအိသည်။ ကြိုးတုပ်ခံထားရသော ထိုမင်းသမီးရဲ့ပုံကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မ ညက ပပရဲ့ပုံတွေကို ပြန်မြင်လာသည်။ သူ့နေရာမှာ ငါဆိုရင်ကော ဘယ်လိုနေမလဲဟုတွေးကြည့်မိသည်။ ကိုယ့်လက်ကောက်ဝတ်လေးတွေကို စုပ်နယ်နေမိသည်။ ဟဲ့ နှင်းဝေ နင်ဘာဖြစ်နေတာတုန်း……။
မျိုးပပက ပုခုံးကို ပုတ်ပြီး ခေါ်လိုက်မှ တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့သတိပြန်ဝင်လာသည်။ စိတ်တွေက လှုပ်ရှားနေစဲ။ နှင်းဝေ နင်ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ တစ်နေ့လုံး ငိုင်နေတယ် ငါ့ကို ပြောပါ၍ီး ဘာတွေဖြစ်နေလဲလို့…….။ ပပက ကျွန်မလက်ဖဝါးလေးကို စုပ်ကိုင်ကာမေးသည်။ ကျွန်မ ညက သူမကို မြက်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်သည်။ ကျွန်မစကားဆုံးတော့ ပပက သက်ပြင်းချသည်။ ပပ ဟိုလူကြီးကနင့်ကို ဘာလို့အနိုင်ကျင့်နေတာလဲ။ နင်ကကောဘာလို့ ငြိမ်ခံနေရတာလဲ။ သေဘာက်လို့…..။ ဘာရယ်…….။ ဟုတ်တယ်နှင်းဝေ………။ ငါ အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ အခါ၊ လွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အရေး အရှိအောင်ချုပ်နှောင်ခံရတဲ့အခါ ရတဲ့ ခံစားမှုကို ကြိုက်လို့…….။ ပပက ခေါင်းလေး ငုံပြီးဖြေတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို မေးတယ်။ ငါ့ကို အထင်သေးသွားပြီလား နှင်းဝေ…..။ ငါအထင်မသေးပါဘူး ပပရယ်။ ကျွန်မ အဆုံး ကျွန်မနဲ့သူမ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖတ်ထားမိသည်။ နင့်ဆီမှာ ဘာလို့အဲ့လို စိတ်မျိုးရှိနေရတာလဲ……..ပပရယ်။
မျိုးပပတို့ မိသားဆုဟာ ကျိကျိတတ်မချမ်းသာကြပေမဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစားထက်တော့ ပိုပြည့်စုံပါတယ်။ ပြီးတော့ မျိုးပပဟာ တစ်ဦးတည်းသော သမီး။ မိသားစုတွေရဲ့ အလိုလိုက်အကြိုက်စောင် ခြင်းကို ခံရတာပေါ့ အရာရာပြည့်စုံနေတဲ့ မျိုးပပတစ်ယောက် ပညာရေးတက္ကသိုလ်တတ်နေစဉ် အသက် ၁၉နှစ်အရွယ်မှာ ပဲထူးဆန်းတဲ့ အရာတွေစိတ်ထဲဝင်လာခဲ့တယ်။ Internet googleတို့ရဲ့ အကူ အညီနဲ့ သူမစိတ်တွေဟာ သီးခြားကမ္ဘာတစ်ခုကို ခြေချမိသွားတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးမရှိရာ၊ လွတ်မြောက်ခွင့်မရှိသော ချုပ်နှောင်ခြင်းများနဲ့ကမ္ဘာပေါ့။ ကိုယ်နောက်စိတ်မလိုက်တော့ စိတ်နောက်ကိုယ်လိုက်ရသည်။ ကိုယ့်အခန်းတံခါးကိုယ်ပိတ်ကာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကြိုးနဲ့တင်းကျပ်နေအောင်ချည်သည် ။ လက်တွေကိုတော့ ကိုယ့်ပါကိုယ်ချည်မရပေမဲ့ တင်းကျပ်နေသော အနေအထားရောက်သည်အထိ ရစ်ပတ်ကာ အကျဉ်းသူလေးလိုနေထိုင်ခဲ့ဘူးသည်။ သို့သော်စိတ်ရဲ့ အလိုစန္ဒများက ပြည့်ဝမှုမရှိ။ နောက်တော့ တာဝန်ကျရာရွာကလေးစီရောက်လာသည်။ ရောက်ပြီး သိပ်မကြာ သူမဘဝ ပြောင်းလဲမဲ့ဖြစိရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ မှတ်မှတ်ရရ နှင်းဝေ မြို့တတ်ကာ လစာသွားထုတ်သည်။
သူမတစ်ယောက်ထဲ အိပ်ခန်းထဲတွင် self-bondageလုပ်နေသည်။ ထိုနေ့မှ ကိုအောင်ကျော် အုန်းထမင်းချက်သဖြင့်သူမတို့ကို လာပို့သည်။ အိမ်ရှေ့က အသံပေးသော်လည်း ဘယ်သူမပြန်မထူးသဖြင့် စိတ်ပူကာ အပေါ်ထပ်အိပ်ခန်းရှိရာ တတ်အလား ကြိုးများဖြင့် ရစ်ပါတ်လုံးထွေးနေသော သူမကို တွေ့သွားလေတော့သည်။ ပထမတော့ ညီမလိုခင်ရသော မျိုးပပကို စိတ်ပူသွားမိသည်။ထို့ကြောင့် အနားကို ကပ်သွားပြီး ကြိုးဖြေပေးဖို့လုပ်မှ လက်ကောက်ဝတ်မှကြိုးတွေက ချည်ထားတာမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ပါကို လိမ်ကျစ်ထားကြောင်း တွေ့သဖြင့်အခြေအနေကို ရိပ်စားမိသွားသည်။ ထို့ကြောင်သူ နေရာမှ လှည့်ထွက်သွားရာ ခြေထောက်မှကြိုး တွေကို အသည်းအသန် ဖြည်နေရာမှ ခေါင်းကိုမော့ကာ ကိုအောင်ကျော်………….. သူမခေါ်သံကြောင့်ကိုအောင်ကျော်က လှည့်ကြည့်ကာ စိတ်ချပါ အကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါဘူး…….။ မင်းစိတ်ထဲ ဘာတွေရှိနေလဲ အကို သိပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ မင်းစိတ်ဖြေဖို့အကူ အညီ လိုမယ် ဆိုရင်တော့ ငါ့စီလာခဲ့ပါ။ ပြောပြီသူလှည့်ထွက်သွားသည်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှားသလားမှန်သလားပင် ကျွန်မမတွေးနိုင်တော့ ။ ထိုနေ့က ည၉နာရီလောက်ကြီး ကိုအောင်ကျော်ရှိရာ အိမ်ကို ကူးခဲ့သည်။ ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက် ဖြည်းဖြည်းသာခေါက်သည်မို့ တံခါးခေါက်သံက တိုးညှင်းပေမဲ့ သူကြားပါလိမ့်မည်။ ဖြည်းငြင်းစွာ ပွင်လာသော တံခါးရဲ့ အသံဟာ အေးစက်တောင့်ခဲနေသည်။ မျိုးပပ ကျွန်မ ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကြိုသိထားသလိုမျိုးသူက ရေရွတ်တယ်။ ပြီးတော့ သူကပြောတယ်။ မင်း ဒီအိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ငါ့လက်ထဲက အရုပ်ကလေးဖြစ်သွားပြီ။ မင်းရဲ့ သိက္ခာတရားတွေ မာနတွေ အားလုံးကို အိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာထားခဲ့။ အိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ မင်းဟာ ငါပြုသမျှနုရမဲ့သူပဲ။ စဉ်းစားပါ သေချာပြီဆိုရင်တော့ ဝင်ခဲ့ ငါ့ အိပ်ခန်းထဲမှာရှိမယ်။ ပြောပြီး သူက လှည့်ထွက်သွားသည်။ ကျွန်မ လည်း လိုက်ဝင်သွားလိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ လှုပ်ခတ်နေတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေ ပြေပျောက် ချင်တာကလွဲကင် ကျွန်မစိတ်ထဲ ဘာမှမသိပါဘူး။ အိပ်ခန်းလေးထဲမှာ သူနဲ့ ကျွန်မ နှစ်ယောက်တည်း။ သူက ခုတင်စောင်းမှာ ထိုင်လို့။ ကျွန်မက သူ့ရှေ့မှာ မတ်တပ်လေးရပ်လို့ပေါ့။ မျိုးပပ…… သူ့ရဲ့ခေါ်သံက တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ညအလယ်မှာ ပို ကျယ်တယ်ထင်ရသည်။ ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်လေးတုန်ကနဲဖြစ်သွားသည်။ ဟို သေတ္တာထဲမှာ ကြိုးတစ်ခွေရှိတယ် ယူလိုက်တဲ့… သူလက်ညိုးထိုးပြရာ သေတ္တာအဖုံးကို ဖွင့်လိုက်သည်။ အနီရောင်ကြိုးတစ်ခွေက ကျွန်မကို ကြိုဆိုနေသည်။
ကျွန်မကောက်ယူလိုက်သည်။ သိပ်မကြာခင် ဒီကြိုးတွေထဲ ကျွန်မ လက်တွေ လှုပ်မရအောင် ဖြစ်နေလိမ်မယ်ထင့်ရဲ့။ သူက ကျွန်မလက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကမ်းပေတဲ့ ကြိုးခွေကို ယူ ကာ နေရာမှထလာသည်။ ကျွန်မထက်ခေါင်းတစ်လုံးပို မြင့်တဲ့သူ့ကို ကျွန်မ မော့ကြည့်နေရသည်။ သူက စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောပဲ ကျွန်မလက်တွေကို ကြိုးနဲ့ပူးချည်ပြီး ကျန်နေတဲ့ ကြိုးစကို ထုတ်တမ်းမှာ ချည်လိုက်တယ် ကျွန်မလက်တွေ မြှောက်လျက်သားပေါ့ မင်းငယ်ငယ်က အရိုက်ခံဖူးလား……။ ဟင့်အင်း ကျွန်မ တစ်ခါမှအရိုက်မခံဖူးဘူး အကို….။ ဆရာမဖြစ်လာတဲ့ အထိပေါ့……။ သူက မျက်ခုံးကို ပင့်တင်ရင်းဆိုသည်။ ကျွန်မခေါင်းငြိမ့်ပြမိသည်။ လက်ကိုလည်းလွတ်လို လွတ်ငြားရုန်းနေမိသည်။ မလွတ်ေုမာက်နိုင်မှန်းသိတော့ အားငယ်လာသလိုလည်းခံစားရသည်။ မင်းတပည့်တွေကို ကောရိုက်ဖူးလား။ အရမ်းပြောရခတ်ရင်တော့ရိုက်ပါတယ်။ အင်း မင်းဒီနေ့ဝဋ်လည်ပြီ………။ပထမဆုံး အနေနဲ့ မင်းကိုယ်ပေါ် အလျိုးရာတစ်ချို့တင်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ သူကျွန်မကို ရိုက်တော့မှာပေါ့ ။ ကျွန်မစိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ဒါနဲ့ ကျောင်းဆရာ အများစုက ဘာလို့တင်ပါးကို ပဲရိုက်ကြလည်းသိလား။ ကျွန်မ ခေါင်းခါပြမိသည်။ တစ်ကယ်လည်း သိမှမသိပဲ။
အဲ့နေရာက အသားများပြီး ရိုက်လို့ကောင်းလို့လေ။ အထူးသဖြင့်မင်းလိုတင်ပါးမျိုးလေ။ ဟုဆိုကာ ကျွန်မတင်ပါးကို လက်နဲ့ ပုပ်သည်။ သာမန်အချိန်ဆို တစ်ခုခုတုံပြန်မိမှာ။ အခုက လက်တွေက ရှိသာရှိသည် သုံးမရတဲ့ အခြေအနေ။ သိမ်ငယ်မှုကိုခံစားရသည်။ သူက ခေါင်းအုံးအောက်ထည့်ထားတဲ့တစ်စုံတစ်ရာကို ယူကာ လေထဲဝှေ့ရမ်းလိုက်သည်။ ဝှစ်…ကနဲအသံကကျောချမ်းစရာ။ သေချာကြည့်တော့ ဝိုင်ယာကြိုးကို တိပ်နဲ့ ပတ်ကျစ်ထားသောကြိုးတစ်ချောင်း။ သူက ကျွန်မရဲ့ကျော ဘက်ကို နေရာယူသည်။ ဝှစ်ကနဲ့ သံကို ကြားလိုက်ရပြီး သုပစ်မှတ်ထားရာ ကျွန်မတင်ပါးတွေ ပူကနဲခံစားလိုက်ရသည်။ နာကျင်မှုကြောင့်ကိုယ်ကလေးရမ်းကာ ရုန်းကန်မိသည်။ သူကထက်မရိုက် ကျွန်မငြိမ်သွားသည်အထိစောင့်နေသည်။ ပြီးမှနောက်တစ်ချက်။ ခပ်ဖြေးဖြေးတိုက်ခတ်နေတဲ့ ညနေခင်းရဲ့လေပြေမှာ သူမထဘီအနားစတွေ လှုပ်ခတိနေသည်။ ဟိုးအဝေးမဗာ ကောင်းကင်ပြာပြာ တိမ်စိုင်ဖြူဖြူတွေ ။နောက် သူမချစ်သော တောင်းတန်းပြာတွေ ။ ဘယ်လောက်ကြီးသော အပူကိုမစို ငြိမ်းသက်ပေးနိုင်သော သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ဟာ လက်ရှိသူမရင်က အပူကို မကြိမ်းအေးစေနိုင်ပါ။
ဟူးကနဲ ရှူထုတ်လိုက်တဲ့သက်ပျင်းမှာ စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေပါသွားရင်ကောင်းမယ်ဟု သူမတွေးမိသည်။ မျိုးမမပြောပြသော အကြောင်းအရာတွေက သူမစိတ်ကို စိုးမိုးထားနိုင်လွန်းသည်။ မကြာခင် မှောင်တော့မည်။ ပြန်သင့်ပြီဟုတွေးကသူမဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ ပြန်ခဲ့သည်။ ဆိုင်ကယ်လေးကိုခြံထဲရပ်လိုက်တော့ အမှိုက်တွေကို မီးရှို့နေတဲ့ ကိုအောင်ကျော့ ပြုံးကာနှုတ်ဆက်သည်။ နောက်ကျတယ်နော် မနှင်းဝေ ဘယ်တွေဝင်နေတာလဲ သူမပြုံးရုံသာ ပြုံးပြမိသည်။ ကျော်ထွက်လာသော သူမကို ကိုအောင်ကျော် နားမလည်စွာကြည့်နေမှာသိသည်။ အိမ်ထဲရောက်တော့ မျိုးပပ ကသူမကို စိတ်မကောင်းဟန်နဲ့ကြည့်သည်။ နှင်းဝေခုံမှထိုင်တော့ သူမ ပုခုံးကို ကိုင်ကာ ငါမပြောပြခဲ့ရင်ပေါင်းသား နှင်းဝေရယ်။ ငါ့စိတ္တဇထဲနင့်ပါ ဆွဲသွင်းမိသလိုဖြစ်သွားပြီ……..။ ငါ့မှာကို စိတ်အခံရှိတယ်ထင်ပါတယ် ပပရယ်။ ငါအခု ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ ပပသူမကို တွေတွေလေးစိုက်ကြည့်တယ်။ ပြီးမ သက်ပျင်းကိုချကာ…..။ နှင်းဝေ ငါနင့်ဘဝကို ငါ့လိုဖြစ်သွားအောင်စွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ နင်စမ်းသပ်ကြည့်မလား…..။ ငါ…… ငါကြောက်တယ်။ ငါလည်းရှိမှာပဲ နှင်းဝေရယ် နင်တစ်ယောက်ထဲမှမဟုတ်တာ။ ပြီးတော့ နင့်စိတ်နင်လည်းသိရတာပေါ့ သာမာန်စိတ်လှုပ်ရှားတာလား တစ်ကယ်ကို အဲ့စိတ်ရှိနေလားဆိုတာ…..။
နင်…..နင်ကောင်းသလိုသာလုပ်တော့ဟာ…….။ ခဏစောင့်ဟု…..ဆိုကာ ပပ အပြင်ထွက်သွားသည်။ သိပ်မကြာပြန်ဝင်လာသည်။ နင်စမ်းကြည့်ချင်ရင် အဆင့်ပြင်ပြီးစောင့်နေပါတဲ့ ခဏနေရင်သူလာခဲ့မယ်တဲ့…..။ နင်မစမ်းချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ပြန်လာပြောပါတဲ့……. ဘယ်လိုလဲ နင့်သဘော။ အဆင်သင့်ပြင် ငါက ဘာတွေပြင်ရမှာလဲ…….။ ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး ငါယေလုပ်ပေးသမျှ အရုပ်ကလေးလို ငြိမ်နေရုံပဲ။ အရုပ်ကလေးလိုတဲ့ နှင်းဝေရင်မှာ လှိုက်ကနဲ……။ သူမပြုံးရုံလေးပြုံးကာ ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်။ ပပကသူမကို ထူကာ ရေးချိုးစေသည်။ နောက်အဝတ်အစားသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်ကာ ဖြီးလိမ်းပေးသည်။ ဆံပင်ကိုလဲ ဆံထုံးလေးထံးပေးသည်။ သူမကိုယ်တိုင်လဲထိုသို့ပြင်ဆင်သည်။ နောက်နှစ်ယောက်သားဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်စောင့်နေကြသည်။ ည ၇ နာရီတိတိမှာ ကိုအောင်ကျော်ဝင်လာသည်။ နှင်းဝေကော ပပပါ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကြသည်။ ကိုအောင်ကျော်က အိမ်ရဲ့ တံခါးမကြီးကို အတွင်းမှလော့ချလိုက်သည်။ နောက်သူတို့နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်သည်။ နှင်းဝေ ရှင်……. ရုတ်တရက်ခေါ်လိုက်တော့ သူမခန္ဓာကိုယ်လေးတုန်ကနဲဖစ်သည်အထိ လန့်သွားသည်။ မင်းအခုချိန်ကစပြီး ငါ့ရဲ့ ကျေးကျွန်ဖြစ်သွားပြီ နားလည်လား….။
မျိုးပပ ကျွန်မနောက်လာရပ်သည်။ ဟူးကနဲသက်ပြင်းချသံကို ကြားလိုက်ရသည်။ နောက်သူမကကျွန်မလက်တွေကို ကျောဘက်သို့လိမ်ယူလိုက်သည်။ အ ကျွန်မရဲ့ အော်ညည်းသံကြောင့် ပပက ဆော်ရီးဟုတောင်းပန်သည်။ ပပ မင်းသူ့ကို တောင်းပန်စရာမလိုဘူး။ သူ့ကို နာအောင်လုပ် ကြိုးကို တင်းနေအောင်ချည် သူ့အော်သံကို ကြားချင်တယ်။ တုပ်တုပ်မှမလှုပ်နိုင်တဲ့ ကျွန်မကို သူက အရသာခံကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ ပပကို တစ်စုံတစ်ရာ ထပ်ပေးလိုက်တယ်။ခွေးလည်ပါတ်လေးတစ်ခု ကျွန်မလည်တိုင်ကျော့ကျော့ပေါ်ထပ်ရောက်လာသည်။ လည်ပါတ်ကသည် သံကြိုးငယ်လေးသူက ခုံပေါ်က ကိုင်ထားတယ်။ နောက်တစ်ချက်စောင့်စွဲလိုက်ရာ လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ခံထားရသူ ကျွန်မကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ကျသည်။နာကျင်မှု ဝမ်းနည်းမှုကြောင့်ကျွန်မ မျက်ရည်ဝဲလာသည်။ ပပ ကော်ဖီသုံးခွက်ဖျော်ပြီး အပေါ်လိုက်ခဲ့…….
အမိန့်ပေးပြီး ကျွန်မကို သံကြိုးက ဆွဲကာ အပေါ်တတ်သွားသည်။ ကျွန်မလည်းနောက်က ယိုင်တိယိုင်တိုင်လိုက်ရတာပေါ့။ အခန်းထဲက ကျွန်မနဲ့ ပပရဲ့ နှစ်ယောက်အိပ်ခုတင်စောင်းမှာ သူကထိုင်ပြီး ကျွန်မကတော့ သူ့ရှေ့က ကြမ်းပြင်မှာ ဒူးတုပ်ထိုင်ရသည်။ ခဏနေတော့ ပပတစ်ယောက် ကော်ဖီဗန်းလေးကိုင်ကာတတ်လာသည်။ ဗန်းလေးကို ကိုအောင်ကျော့်နဘေးမှာ တရိုတသေချကာ ကျွန်မဘေးမှာ ဒူးတုပ်ကာလာထိုင်သည်။ ကိုအောင်ကျောက ကော်ဖီခွက်တစ်ခုထဲဆေးတစ်လုံးထည့်ကာမွှေနေသည်။ ပြီးတော့ ပပကို ပေးကာ ကျွန်မကို တိုက်စေသည်။ ကော်ဖီတွေကုန်သွားတော့ ကျွန်မကို ကြိုးဖြည်ပေးသည်။ ပြီးတော့ အဝတ်တွေ တစ်ခုမကျန်ချွတ်စေသည်။ ကျွန်မရဲ့လက်ကလေးတွေနဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့ အင်္ဂါတွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ကျွန်မကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမဲ့သူက ကျွန်မကို ခုတင်ပေါ်ဆွဲတင်ကာ ပါတ်လက်လှန်စေပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးသို့ဆွဲကားကာ ခုတက်တိုင်တွေမှာ ကြိုးနဲ့ ချည်လိုက်သည်။ ခြေထောက်တွေလည်းထိုနည်း လည်ကောင်း………။ကျွန်မဟာ ခုတင်ပေါ်မှာ ခြေကားယားလက်ကားယားပေါ့။ လည်ပင်းက လည်ပါတ်ကိုတော့ ခဏဖြုတ်ပေးထားသည်။
ခဏကြာတော့ ကျွန်မစိတ်တွေ လှုပ်ရှားလာပြီး ကိုယ်အင်္ရာအစိတ်အပိုင်ူတေလကနေ ယားယံငေါ ဝေဒနာကို စတင်ခံစားလာရသည်။ ကျွန်မကို ကျွန်မ ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိ။ ဝေဒနာက ပိုပို ပြင်းလာသည်။ သူက ကျွန်မနားလျှောက်လာကာ ဘယ်လိုလဲ နှင်းဝေ နေလို့မှကောင်းရဲ့လား…။ နင့်ကို ကာမစိတ်ကြွဆေးတွေ တိုက်ထားတာလေ……..။ ကျွန်မပြန်မဖြေနိုင် ရင်တစ်ခုလုံးမောဟိုက်နေသည်။ သူ့လက်တွေက ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်ကို ပွတ်သပ်နေပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ညိုးလက်မနဲ့ဖိညှစ်လိုက်သည်။ အား……. နာကျင်မှုကြောင့် ကျွန်မ ခေါင်းတစ်ခါခာနဲ့ အော်မိသည်။ ခံစားနေရသော ဝေဒနာ အနည်းငယ် သက်သာသလိုတော့ရှိသည်။ မင်းလိင်မဆက်ဆံရင် ဒါမှမဟုတ် အာသာမဖြေရင် တစ်ညလုံးရူးလောက်အောင် ခံစားရတော့မှာ…။ မင်းကို ဒီတိုင်းထားလိုက်ရမလား မလုပ်ပါနဲ့ရှင် ကျွန်မကို အာသာဖြေခွင့်ပေးပါ…..။ ကျွန်မ အရူးတစ်ယောက်လို အော်ဟစ်တောင်းပန်မိသည်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မပါးစပ်ကို တိပ်နဲ့ကပ်လိုက်တညမို့ ဝူးဝူးနဲ့သာ အသံထွက်နိုင်သည်။ နောက်တော့ သူ့လက်စွဲတော် ကြာပွတ်လေးနဲ့ ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်အနှံကို ရိုက်နှက်ပါတော့သည်။ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်နေသော ရင်သားတွေသာမက တစ်ခါတစ်ခါ ပေါင်ကြားက အင်္ဂါနုနုလေးကို ပါလာထိသည်။ အရည်ကြည်လေးတွေစိမ့်ထွက်လာသည်။ နာကျင်မှုကြောင့် စိတ်တွေ ပြေလျော့သွားသလိုရှိပေမဲ့ ယားယံမှုက ရှိစဲပင် ။
နောက်တော့ ကို အောင်ကျော်က ပပကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ကာ သွား နင်သူငယ်ချင်းကို ပါးစပ်နဲ့ ပြုစုပေးလိုက်ဟု အမိန့်ပေးသည်။ ပပလည်း အမိန့်အတိုင်း ခုတင်ပေါ်တတ်လာတာပေါ့ ပထမဆုံး ကျွန်မရဲ့ ရင်သားတွေကို လျှာနဲ့ရပ်လိုက် စို့လိုက်လုပ်သည်။ နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ဆင်းသွားပြီး ပူစီလေးကို လျှာနဲ့ရပ်ပေးပါသည်။ တစ်ခါမှာ မကြုံဖူးတဲ့ ခံစားမှုကြောင့် အပျိုမလေးကျွန်မ မူးမူးမေ့မေ့ ။ နောက်တော့ တစ်ကိုယ်လုံးပျော့ခွေတဲ့အထိခံစားလိုက်ရသည်။ လက်ကောက်ဝတ်မှာ ထင်နေသော ကြိုးရာလေးကို ကြည့်ပြီး နှင်းဝေ အတွေးနယ်ချဲ့နေသည်။စနေနေ့မို့ ကျောင်းပိတ်သည်လေ….. ဟဲ့ မယ်မင်းကြီးမ ဘာတွေတွေးနေတာတုန်း……။ အနောက်ကနေ ပခုံးပုတ်ပြီး ခေါ်တော့ နှင်းဝေ ဆက်ကနဲတုန်သွားသည်။ ပပ….လန့်တာဟာ……. နောက်မှလန့် သွား……ရေသွားချိုး….. ကိုအောင်ကျော်က သူမြို့တတ်ရင်လိုက်ခဲ့တဲ့…….. ။ ဟဲ့သူက ငါ့ဘယ်ခေါ်သွားမှာတုန်း……..။ သိချင်သူ့သွားမေးလေ……။ နှင်းဝေက ကြောက်လန်ဟန်နဲ့ ပခုံးတွန်ပြတော့ ပပကရယ်သည်။ နှင်းဝေလဲရေလဲထဘီလဲကာ ရေချိုးခန်းဝင်ခဲ့သည်။ ရေချိုးပြီး အခန်းပြန် မှန်တင်ခုံရှေ့အလှ ပြင်နေတုန်း ပပကနောက်နေသိုင်းဖက်သည်။ နင့်ကိုယ်လုံးလေး သိပ်လှတာပဲနှင်းဝေရယ် ငါညကမှသိတာ ဟာ…. ဘာတွေပြောနေတာလဲ ရှက်သွားသဖြင့် နှင်းဝေမျက်နှာလေး နီရဲသွားကာ ပပကို လက်နောက်ပြန် ဆွဲဆိတ်သည်။ ပပရယ် ရယ်ရင်းရှောင်လိုက်သည်။
ချွင် ချလွင်….. ဘာသံတွေတုန်း နှင်းဝေရဲ့ အမေးကို ပပက ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ ဘာသံထင်လို့တုန်းလို့ပြန်ဖြေတယ်။ ငါသံကြိုးသံကြားလိုက်တယ် ဘယ်ကလဲတော့မသိဘူး…..။ ဒီကေလ….. ပြောပြောဆိုဆို ပပက အဖြူရောင်ဂါဝင်လေးက ပေါင်းရင်းထိမတင်လိုက်သည်။ ပေါင်လယ်မှာ သူမရဲ့သွယ်စင်းတဲ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ချုပ်နှောင်ထားသော လက်ထိပ်ခေါ်မလား ခြေကျင်းခေါ်မလားအရာတစ်ခု။ ပေါင်မှာ ပတ်ထားသော ကွင်းကို သရေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး sizeက လိုသလို အတိုးအလျော့လုပ်နိုင်သည်။ အလွယ်တကူ ဖြုတ်မရရောင် သေ့ခလောက်လေးများနဲ့ခတ်ထားသည်။ အလယ်ကနေ မတိုလွန်းမရှည်လွန်းသော သံကြိုးလေးဖြင့်ဆက်ထားသည်။ လှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်နိုင်ပေမဲ့ ခပ်မြန်မြန်သွားစရာရှိရင်တော့ ကျိန်းသေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့ ပစ္စည်းတွေ……။ နင်က မနက်စောစော သွားခစားခဲ့တယ်ပေါ့…….။ ဟိုက ကြိမ်စင်္ကြနဲ့ ရိုက်ခေါ်တာကိုးဟ……။နင့်အတွက်လဲ လက်ဆောင်ပါသည်။
လမ်းလျှောက်ရတာ ခြေလှမ်းမမှန်ချင်။ သူမရဲ့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာ အားလုံး ကိုအောင်ကျော့်လက် အပ်ထားရသည် မဟုတ်လား။ လူပုံအလယ်မှာ တုန်ခါစက်တစ်ခု ပင်တီထဲထည့်ဝတ်ပြီး လမ်းလျှောက်ရလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးမိခဲ့ ။ ခုတော့ နှင်းဝေဆိုတဲ့ သူမ အပြင်ပန်းကြည့်ရင် ရင်ဖုံးအင်္ကျီချိတ်ထဘီနဲ့ အိနြေ္ဒရှင်ပေါ့။ ထဘီထဲမှာတော့ တုန်ခါစက်အစွမ်းကြောင့် စိုစိစိဖြစ်နေသော ပင်တီတစ်ထည်။ ဒီကြားထဲ မျက်နှာ မပျက်အောင် ထိန်းရသေးသည်။ နေက သူမအတွက်ပို ပူနေသည်ထင်ရသည်။ သူမအပေါ် ကြည့်နေသော မျက်လုံးတိုင်းကို ကြောက်မိနေသည်။ ကို အောင်ကျော်ကတော့ ဘေးမှာ လေလေးတစ်ချွန်ချွန်နှင့် ခလုတ်ကို ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်။ ဝယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကုန်ကားနဲ့ ရွာကို လမ်းကြုံတင်ပေးပြီးတော့ ကို အောင်ကျော်က သူမကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ တစ်နေရာခေါ်သွားသည်။ ခြံကျယ်ကြီးတစ်ခု……… ။ သူက အသင့်လူခေါ်ဘလ်ကို နှိပ်လိုက်တော့ ခြံစောင့်ဖြစ် ဟန် တူသူ တစ်ယောက်ထွက်လာသည်။ သော့ဖွင့်ပေးပြီး သော့ကို သူ့လက်အပ်ကာ ထွက်သွားသည်။ နှင်းဝေ တစ်ယောက် ယောင်လည်လည်နဲ့ အိမ်ထဲလိုက်ဝင်ခဲ့သည်။ အိမ်ဆောက်ထားတဲ့ ပုံက ရှေးဆန်ပြီး ခန်းနားလှသည်။ ဟောင်းနေပေမဲ့ ခိုင်ခံ့နေသေးသည်။
ကျွန်မကို ဘာလို့ ဒီကို ခေါ်လာတာလဲ နှင်းဝေရဲ့ မအောင့်နိုင်အောင် မေးလိုက်တဲ့ အသံကြောင့် ကို အောင်ကျော်လှည့်ကြည့်သည်။ ထို့နောက် သူ့အိပ်ထဲက တစ်စုံတစ်ရာကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ နောက် ထို အနာကို စုပ်ကိုထားတဲ့ လက်သီးစုပ်လေးသူမရှိရာကို ကမ်းလိုက်သည်။ လက်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်လိုက်သည်။ လက်ဖဝါးပေါ်မှာ လက်စွပ်လေးတစ်ကွင်း……..။ မင်း တစ်သက်လုံး ငါ့အတွက် အသက်ရှင်ပေးနိုင်မလား နှင်းဝေ…….. အသံက နူးညံသည်။ အမိန့်သံမပါ။ သို့သော် သူမနားထဲ အမိန့်တစ်ခုလို ကြားသည်။ သူ သူမကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေတာပဲ။ လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ နှင်းဝေ ဘယ်တော့မှ ခေါင်းထဲမထည့်ရသေးတဲ့အရာ။ ရုတ်တရက်သူမ ဘာပြန်ပြောရမည်မသိ။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ပိုင်စိုးပိုင်နင်းပြောပုံကြောင့် အောင့်သက်သက်ခံစားရသည်။ မိန်းမက မိန်းမပဲလေ……။ ကျွန်မ စဉ်းစားပါရစေဦး……။ ထိုနေ့က ထိုကိစ္စ ထိုမျှနှင့်ရပ်သွားသည်။ ကိုအောင်ကျော်က သူမကို အိမ်အနှံ့ ခြံအနှံ့လိုက်ပြသည်။
ကျောချမ်းစရာ…..။ လူတစ်ယောက်ကို ပုံစံမျိုးစုံနှင့် ချုပ်နှောင်နိုင်သော ကိရိယာများ လှောင်အိမ်များ ကြာပွတ်များ မျိုးစုံလွန်းသည်။ သူကပြောသေးသည်။ သူ့အချစ်ကို သာလက်ခံရင် သူမတစ်သက်လုံး ဒီအိမ်မှာနေရမှာတဲ့…….။ ညရောက်တော့ပပနဲ့ တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ ပပက မျက်လုံးလေးပြူးပြီး အံသြလို့။ ပပနဲ့ ကို အောင်ကျော် ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရိပ်အယောင်မပြခဲ့ ဖူးဘူးတဲ့။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း နှင်းဝေ ကြည်နူးရပါသည်။ ကျောင်းတွေပိတ်တဲ့ နွေရာသီ တစ်ခုမှာ သူမ ကို အောင်ကျော့်ကို အဖြေပေးခဲ့သည်။ နောက်ရွာမှာပဲ အကျဉ်းရုံး ပြုလုပ်ကာ ကို အောင်ကျော်ရဲ့ အိမ်ကလေးဆီလိုက်သွားခဲ့သည်။ အဲ့ဒီမှာ လှောင်အိမ်လေးတွေ လက်ထိပ်လေးတွေ သူမကိုစောင့်နေလိမ့်မည်။ ပပကတော့ သူမတို့နှစ်ဦးကို နှုတ်ဆက်က တာဝန်ကျရာ နောက်တစ်ရွာကို ကူးသွားသည်။ တစ်နေ့ သူမမှာလဲ စိတ်တူရာ လူတစ်ယောက်ရှိလာလိမ့်ဦးမည်။